SAMBAVA : Nanamafy indray ireo velirano efa nataony tamin’ny vahoaka ny kandida n°13
Ny Faritra Sava indray no nanohizan’ny Kandidà Andry Rajoelina ny fampielezan-keviny omaly. Nohamafisiny indray ireo toky sy fanamby lehibe efa nomeny ny vahoaka tany an-toerana. 6 décembre 2018
Taorian’ny Faritr’Itasy dia ny Faritra Sava indray no nanohizan’ny Kandidà Andry Rajoelina laharana faha-13 ny fampielezan-keviny ho amin’ny andro faharoa, omaly. Nandritra ny fandalovany tany an-toerana tamin’ny fihodinana voalohany iny dia efa nisy ireo toky sy fanamby nifanaovany tamin’ireo mponina.
Nohavaoziny indray izany tamin’ny fandalovany omaly ary nohamafisiny tamin’ny alalan’ireo fanamby apetrany hoentina hitondrana fampandrosoana ao anatin’ny Faritra Sava. Notsidihiny manokana ny Kaominina Marojala, tokony ho 45km miala ny Distrikan’i Sambava. Velombolo tanteraka ireo vahoaka satria sambany no nisy olom-panjakana sy kandidà tahaka izao nandalo tao amin’ity tanàna ity. Nahazoan’ny Kandidà Andry Rajoelina vato be ny tao amin’ny Kaominina Marojala tamin’ny fihodinana voalohany lasa teo.
Nanentana ireo mponina hatrany ny tenany fa averina hotohizana indray izay fandresena izay ho amin’ity fihodinana faharoa ity. Avy hatrany dia famaliana ireo olana mianjady amin’ny andavanandrom-piainan’ny vahoaka no nahamaika ny Kandidà Andry Rajoelina laharana faha-13. Nitarainan’ireo mponina ny faharatsian’ny lalana. Tsy misy afa-tsy ampahan-dalana 45km monja no mampifandray ity farany amin’i Sambava kanefa dia hatao ao anatin’ny ora 8 be izao. Fangatahan’ny mponina tamin’ny alalan’ny ben’ny tanànan’i Marojala ny hamatsiana hazo lehibe mba hanamboarana ny lalana.
Tsy niandry ela fa teo no ho eo dia valin-teny mahafa-po no nomen’ny kandidà Andry Rajoelina, ary ato ho ato dia ho tonga ao Marojala ireo hazo ireo. Nampanantenainy ihany koa fa ho avy ny fitaovam-pianarana maimaim-poana na « kits scolaire » ho an’ny mpianatra. Nandritra ity fandalovany tao Marojala ity dia ben’ny tanàna miisa 18 avy amin’ireo Kaominina no niaraka taminy. Taorian’izay dia nihazo an’Andapa indray ny Kandidà Andry Rajoelina. Mipetraka hatrany ny fanamby ho an’ny fampandrosoana tena izy.
Fotodrafitrasa mamaly ny filàn’ny mponina no nomeny, toy ny hopitaly, famatsiana herinaratra ho an’ny isan-tokantrano. Ankoatra izay nilaza ihany koa ny Kandidà n°13 fa ampiakarina ny vidin’ny lavanila mba hanatsarana ny fari-piainan’ireo tantsaha. Tamin’izay faritra rehetra nandalovany dia tsy nitsahatra ny tenany nanentana ny olom-pirenena mba hanefa ny adidiny amin’ny 19 desambra ho avy izao. Naverimberiny fa tsy hitady tombontsoany manoakana no hilatsahany fa hanasoa ny fiainan’ny Malagasy tsy an-kanavaka.